Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoyda Ee Saakay Oo Sabti Ah Loogu Hadal-Heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkaan Ka Aqriso Liiska Oo Dhameystiran. – Laacib.net
Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoyda Ee Saakay Oo Sabti Ah Loogu Hadal-Heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkaan Ka Aqriso Liiska Oo Dhameystiran.
Daafaca reer Paraguay Fabian Balbuena ayaa noqday xiddiga loogu hadal heynt abadan yahay, aad ayuuna ugu dhaw yahay inuu ku biiro kooxda West Ham United. Fabian oo ka tirsan kooxda Corrinthians ayaa kusoo jeeda horyaalka Premier League.
Felipe Anderson ayaa u muuqda mid soo gaari doona magaalada London si uu ugu biiro kooxda West Ham United, si la mid ah xiddiga Sunderland Joel Asora ayaa isna kusii jeeda Swansea City.
Jorginho ayaa ah magaca ugu weyn ee liiskaan ku jira, xiddiga reer talyaani wuxuu qarka u saaran yahay ku biiritaanka kooxda Chelsea, wuxuu noqon karaa saxiixa ugu horreeya ee Maurizio Sarri uu kusoo kordhiyo Stamford Bridge.
Gelson Martins ayaa isna kusii jeeda Atletico Madrid halka Matteo Darmian oo ka tirsan Man United uu isna kusii jeedo kooxda Inter Milan.
Daawo Oo Go,aami: Jorginho Mise Fred? Baasaska waalida ah,Xirfada Cajiibka Ah, Kee Ayaa Fiican.